I-Urea Crea UA-Umsebenzi weRenalⅠ okhawulezayo weReagent Kit-Indawo yoVavanyo loKhathalelo-lweSinocare
I-Urea Crea UA-Umsebenzi weRenalⅠ okhawulezayo weReagent Kit
[imeyile ikhuselwe] I-Urea / i-Creatinine / i-Uric Acid Reagent Kit yenzelwe ukumisela ubungakanani be-urea, i-creatinine (i-Crea) kunye ne-uric acid (UA) kwi-serum yabantu. Ngokwezonyango, isetyenziselwa ukubeka esweni umsebenzi wezintso.
I-Urea sisiphumo sokugqibela sokuqhekeka kweeproteni emzimbeni womntu. Yenziwe ngesibindi kwaye ikhutshwa ikakhulu emva kokudlulela kwizintso. Imilinganiselo ye-Urea kwi-serum luphawu olubalulekileyo kuvavanyo lweklinikhi lomsebenzi we-renal.
I-Creatinine yimveliso yenkunkuma yokudala edityaniswe kwimisipha, kwaye iyacocwa emzimbeni zizintso. Amanqanaba aphezulu e-creatinine yegazi ihlala isilumkiso sokungasebenzi kakuhle okanye ukusilela kwezintso. I-creatinine yegazi sisalathiso esichanekileyo ngokuthe ngqo esibonisa owona monakalo kwizintso, uxinzelelo lwe-creatinine egazini sisibonakaliso esibalulekileyo kuvavanyo lomsebenzi we-renal.
I-UA yimveliso yokuphela kokuqhekeka kwe-purines, kwaye icociwe emzimbeni womntu ngezintso kunye nomchamo. Inqanaba eliphezulu le-uric acid liqwalaselwa gout kwizigulana. Kwizigulana ezine-nucleosides ezandisiweyo, ezinje ngeleukemia, myeloma ezininzi, polycythemia vera; izifo zezintso ezinjenge-acute / chronic nephritis, ilitye lezintso, njl., inqanaba le-uric acid egazini liphezulu kakhulu.
Inkqubo yokuphendula kwinqanaba leswelo, usebenzisa indlela ye-enzymatic ekhokelela kwiziphumo ezichanekileyo
Iziphumo ziyafumaneka kwimizuzu eli-10
I-Urea / i-Crea / i-UA
I-Urea: 0.9 ~ 40 mmol / L
Uyilo: 30 ~ 3000 µmol / L.